Iindaba ezi-5 ezahlukileyo zokuhlela ngenyanga kaMatshi | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | I-Biography, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama, Inoveli yothando
Ngomhla sele ikufutshane nekona kwaye okuhle kuza Ukukhutshwa komhleli. Ndikhetha ezi Iindaba ze5 (kunye nezinye ezingaphezulu) ze Umxholo ohlukeneyo kunye nazo zonke izinto ozithandayo. Imbali, inoveli yolwaphulo-mthetho, iibhayografi ezinomdla zabafazi abanomdla ngakumbi, ezakudala ezidibeneyo kunye nothando oluncinci. Masibone.
1 Ntombi yomzobi - uJulie Klassen
2 IiSloths - uCharles Dickens kunye noWilkie Collins
3 Isikhephe sokugqibela-iDomingo Villar
4 Abafazi abanobuqili benkulungwane ye-XNUMX - uVicenta Márquez de la Plata
5 Yonke into izakulunga-uEmilio Ortiz
Intombi yoMzobi -UJulie Klassen
Kancinci inoveli yothando ukuqala. Esi sihloko nguJulie Klassen, umlandeli wenoveli yothando yaseVictoria, sisiqalo esihle. IKlassen, Umbhali waseMelikaUsebenze kwilizwe lokupapasha iminyaka elishumi elinesithandathu kwaye ngoku uzinikezele ngokukodwa ekubhaleni.
Kule noveli usibalisela ibali lika USophie Dupont, osebenza kwiworkshop katata wakhe, ongumzobi womzobo. Kodwa naye unayo talente nangona eyigcina ifihliwe. Kuhambo oluya kunxweme lwe-Devon adibana nalo UWesley Overtree, indoda yokuqala ukumnaka.
Kwelakhe icala, ukapteni UStephen Overtree soloko kufuneka elihoyile ishishini umntakwabo uWesley angazimiseliyo kulo. Kwaye kwakhona dibana no sophie, Oqeshe indlu yomntakwabo, kwaye uyachukumiseka yena. Xa efumanisa ukuba naye ukhulelwe umntakwabo, omshiyileyo, ugqiba kwelokuba acebise umtshato, hayi ngenxa yothando, kodwa ukuphepha kunye umsindise kwihlazo. USophie uyayamkela kwaye ahambe nokapteni aye ekhayeni lakhe, kwiOverreeree Hall.
Bayonqena - UCharles Dickens kunye noWilkie Collins
Ukuba ababhali babini abadumileyo besiNgesi kungekuphela ngexesha labo, kodwa ukutyhubela iinkulungwane, bahlangana ukuze babhale le noveli sele inomdla ngakumbi. Bayonqena ubalisa ubomi obuyinqaba Abalinganiswa ababini abachitha ubusuku bobusuku indlela ye-craziest, umzekelo, ukulala nomntu ofileyo, okanye nabantu abaphambeneyo kwindlu ephambeneyo, okanye kwigumbi lokulala elinomtsalane kwi-Bridal Chamber.
Ngokutsho kweengcali, le ntsebenziswano kunye noCollins, isisombululo ekuhambeni kwe UDickens, umele ukuba ukutshintsha okanye ukubonakaliswa kwenqanaba lomntu eliphazamisayo Umbhali wayehamba ubomi obumbaxa awayebukhokele phakathi komfazi wakhe kunye nesithandwa sakhe, umdlali weqonga uEllen Ternan. Kodwa, ekugqibeleni, esi sihloko sihlala njenge- umzekelo owahlukileyo womanyano loyilo yala magama mabini makhulu kuncwadi lwekhulu le-XNUMX.
Inqanawa yokugqibela -I-Villar yaseDomingo
Abalandeli bakaDomingo Villar banethamsanqa. Sipasile ngaphezulu kweminyaka esixhenxe belindile lUkupapashwa kweXNUMXst kwesahlulo sesithathu sesaga yomhloli weVigo U-Leo Caldas. Ekuqaleni yayinesihloko esahlukileyo: Amanqamlezo amatye. Kodwa ekugqibeleni luyeza usuku Matshi 6.
Silandela Vigo, echwebeni layo, kuthi sonke esiyaziyo loo ndawo kodwa sihlala kude nayo, njalo Kuluyolo ukutyelela ngokwenyani kunye nobuxoki. Kwaye ngakumbi ukuba kunjalo nge-Galician, ezolileyo kunye ne-melancholic Leo Caldas, esicinga ukuba uya kuqhubeka ehamba kakuhle nomncedisi wakhe URafa estevez.
Kule meko kuya kufuneka baphande ukunyamalala kwebhinqa eliselula. Kusekwindla, unxweme lwaseGalician luyachacha kwisaqhwithi kunye noyise onovalo UMonica Andrade Uvela phambi komhloli xa ingekho intombi yakhe ngeempelaveki nasemsebenzini wakhe eVigo School of Arts and Crafts.
Amanenekazi akrelekrele kwinkulungwane ye-XNUMX -Vicenta Márquez de la Plata
IVicenta Márquez de la Plata yiyo mbali eneemfuno ezizodwa kumaXesha Aphakathi, uthweswe izidanga kuluhlu lomnombo, ubugqwetha kunye nobungangamsha, kunye notitshala otyeleleyo kwiYunivesithi yaseLisbon kunye noprofesa kwisitulo saseMarqués de Ciadoncha eMadrid. Qhubeka nge uphando lwezembali kwaye ubhala iincwadi kunye namanqaku kwiimagazini ezizodwa. Umbhali we ngaphezulu kwamagama angama-20, oyena mntu afundwe kakhulu kuye UIsabel umKatolika.
Kwesi sihloko ubhala ngaso UMargaret waseHabsburg, uLouise waseSavoy, uCatherine waseAragon kunye no-Anne waseBrittany, Abafazi abane abaqwalaselwa ngumbhali bulumko ngexesha lakhe, ngenkulungwane ye-XNUMX. Yincwadi equlathe kungekuphela nje imbali, iibhayografi okanye ubuqhetseba bezopolitiko, kodwa ikwabonisa umfanekiso omkhulu woluntu lwaseYurophu.
Yonke into izakulunga -Emilio Ortiz
Kwakhona ndizisa esinye isihloko sokuba singobani abathandi bezinja. Kwaye ndiyenza kwakhona ngoncedo lukaEmilio Ortiz, umbhali we Ngamehlo am amancinci o Ubomi nenja bonwabile. Ngeli xesha uxubanisa ithoni yokuhlekisa emnyama ejikeleze a igosa elithile lomcuphi.
Yenziwe liqela elikhethekileyo labalinganiswa: mario, usomashishini ongaboniyo; Nicolás, umhlobo wakho osenyongweni, kwaye IMilagros kunye noJuanma, abantu abancinci ababini abanobuchule obukhethekileyo. Bebonke baya kuphanda ngokwenzekileyo intombazana elahlekileyo iinyanga. Kodwa, ukongeza, iqela lomcuphi liyajoyina dos hounds iklasi yokuqala: Cross, Inja kaMario ekhokelayo, ngoku ethathe umhlalaphantsi kwaye kuya kufuneka enze ubuhlobo obuhle nayo Jazz, uMalusi waseJamani uhamba naye ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iindaba ezi-5 ezihlukeneyo zokuhlela zenyanga kaMatshi